Ao amin’ny ampahany voalohany ianao dia hianatra ny fototra, ny fototra mafy ny hahalala vaovao ny vehivavy. Mieritreritra ny olona sasany fa afaka manatona ny vehivavy tsy mahazo ny mahafantatra ny fototry raha ny marina izany dia ny fototry izay hahatonga ny fahasamihafana, tsy hafahafa tricks. Ianao dia hianatra ny fototra hadisoana izay olona ho ao amin’ny fomba fiasa, ary ny lafin-javatra maro, izay mamaritra tsy ny fahombiazana ny fomba fiasa miaraka amin’ny vehivavy, fa koa ny rehetra fifandraisana ara-tsosialy. Ao amin’ny tapany faharoa isika dia miresaka momba ny fomba ny hatsiaka, ary avy eo ny fomba tsy dia mahazatra loatra ny vehivavy. Izaho dia manazava anao tsy ny isan-karazany ny fomba fiasa, fa koa ny fomba, ny fotoana sy ny antony ampiasana azy ireo, miaraka amin’ny maro ny andian-teny ny fomba izay azonao atao ry zareo. Ambonin’izany rehetra izany, dia manazava izay manao asa tokana isaky ny fomba fiasa, nahoana no tsy mampiasa ny zo hampiakatra ny andian-teny hoe, misy antony izay mamaritra ny fahombiazana na ny tsy fahombiazana ny fomba mihitsy, ary izany dia teo amin izany fa ianao dia tsy maintsy mifantoka mba ho fahombiazana. Ao amin’ny ampahany fahatelo isika, dia foana ny fomba ny hatsiaka, fa tamin’ity indray mitoraka ity amin’ny fandinihana ny toe-javatra isan-karazany izay mety hitranga ianao, ka tsy mahalala izay tokony hatao isaky ny fisehoan Ao amin’ny fizarana fahefatra, fa tsy manova ny foto-kevitra, izany, miresaka ny fomba mafana, ary avy eo dia ahoana no fomba ny vehivavy ao amin’ny toe-javatra isan-karazany, ary, ambonin’izany rehetra izany, ny fomba hanamboarana ny ara-tsosialy faribolana widened, mba fantatrao be dia be ny olona hanao izany ny tsy dia voatery manao ezaka mba hahafantatra ny vaovao vehivavy, ho fomba iray fa ianao no aseho mandrakariva. Ao amin’ny fahadimy sy farany amin’ny ampahany isika hijery ny fomba mafana, ianareo dia hahita ny fomba fampiasana izany amin’ny toe-javatra isan-karazany, ary hasehoko anao aho ny fomba ny mahafantatra ny vehivavy izay manome vokatra tsy mampino amin’ny ezaka kely dia kely, ary izahay koa dia miresaka momba ny fomba kely manokana hahafantatra ny vehivavy. Amin’ny farany, dia ho hitanao ny fanazaran-tena ao amin’ny Boky Fanofanana fa mila hanafainganana ny fandrosoanao ary mba ho ara-boajanahary sy tampoka ny zavatra nianaranao. Rehefa avy nahita izany rehetra ireo fomba ireo, raha mametraka amin’ny fampiharana, ny fahadimy izay mamaky, ny fahalalana ny vehivavy dia hitombo be. ‘Izany dia tsara dia tsara ny boky indrindra eo amin’ny faritry ny ohatra azo ampiharina sy ny tany am-boalohany mailaka:’. izany dia tsara dia tsara ny boky indrindra eo amin’ny faritry ny ohatra azo ampiharina satria ny farany, dia ireo izay tena manisa, sy ao amin’ny boky no azo ampiharina amin’ny anarana ny zava-misy.»Hitako ny mpitari-dalana tena feno sy tany am-boalohany mailaka:’. ny ebook mitambatra tsara amin’ny lafiny teorika (ny fototra) amin’ny lafiny fampiharana ny (mitovy fototra). Misy ohatra maro manokana sy ny an-tsipiriany, mba hanao ny asa amin’ny sasany ary maro ny toe-javatra toy izany aho mahita ny mpitari-dalana tena feno.»Tsara ny sasany ny fitaomam-panahy avy amin’ny boky dia mety manampy ihany koa mamitaka ny tena za-draharaha ‘ny e-mail tany am-boalohany:’. Izaho dia mpankafy ny famitahana, avy ny fahiny indrindra indrindra ankehitriny, efa vakio imbetsaka ny ebook ary tsy maintsy lazaiko fa tena tsara izany. Afaka manokana milaza fa ny sasany tsara ny fitaomam-panahy avy amin’ny boky dia mety ho mahasoa na dia ny mamitaka ny manam-pahaizana’, avy hatrany aho dia nahita vehivavy ny andro rehefa mamaky ny e-mail tany am-boalohany:’. efa maro ny azo ampiharina ny fanazaran-tena, dia manazava ny toe-tsaina izay misy fiantraikany eo ny vehivavy, ary nanampy ahy hahatakatra ny sasany amin’ireo fahadisoana ‘fandaharana’ ny ahy. Haingana aho nahita vehivavy ny andro rehefa avy namaky izany aho (ny dia ho tsara vintana.) mah: -)’, ‘fitaovana Lehibe ihany koa ho an’ireo izay zavatra efa fantatrao ‘sy ny tany am-boalohany mailaka:’. Iray amin’ireo zava-tsarotra izay tsy maintsy, indrindra dia ny hoe, mba manana rafitra ankapobeny ho amin’ny tena fomba fijery, izany hoe, fantatro fa inona ilay izy ary ahoana ianao mety atao, fa ny foto-kevitra toy ny mitondra ny lanjany, sy ny receptivity koa aoka isika hilaza ny teorika anjara tsy mahalala azy sy mahafantatra azy ireo bebe kokoa ny fahitana ny zavatra ianao dia mba atao fa ankehitriny, araka ny vokatra tena tsara, na dia ireo mifanaraka amin’ny fepetra izay misy dia, mino aho fa tany amin’ireo tanàna kely misy lehibe mila mamorona faribolana ara-tsosialy sy ny fomba mafana noho ny hatsiaka no tena sarotra ny mahazo vokatra mahafa-po, raha tao amin’ny tanàna lehibe afaka mandeha amim-pahanginana ny fomba mangatsiaka izany. Ny ebook, na izany aza, manazava na ny iray na ny hafa ao amin’ny marimarina kokoa in-lalina izany, ny tena fitaovana lehibe na dia ho an’ireo izay zavatra efa fantatrao. Hahita anao tsy ho ela.»Tiako be dia be, noho izany dia tanteraka tany am-boalohany sy ny mailaka:’. ny ebook tiako izany be dia be, noho izany dia vita. Manao malalaka indray mitopy maso an’i ny fomba hahazoana mahafantatra ny vehivavy ka misy impunti amin’ny fomba iray, ary izany no mahatonga anao mahatsiaro tony kokoa satria manana fahafahana bebe kokoa sy vokatr’izany, izany dia mamela anao hahazo bebe kokoa ny vokatra. ‘Ao amin’ny fialan-tsasatra aho, niezaka hahafantatra ny anarana sy ny any am-pandriana (amin’ny seza) miaraka aminy. ‘ny tany am-boalohany e-mail:’. hello Marka, ny ebook ahoana no hahafantatra ny vaovao vehivavy efa nahavita manitatra ny fahalalana ao amin’ny oniversite aho ary niezaka ny hahazo avy ny fampiononana faritra, ny fahafantarana kokoa ny vondrona ny ankizilahy sy ny ankizivavy. Na dia ao amin’ny fialan-tsasatra ho Rhodes teo anivon ‘ny vahiny izay tsy dia afaka mahafantatra italiana avy any Milan, ao amin’ ny trano fandraisam-bahiny sy ny any am-pandriana (amin’ny seza) miaraka aminy. Faly aho miaraka amin’ny boky ary azoko antoka fa ianareo dia afaka manome ho toy ny kely indrindra ny hatairana ny fiainan’ny olona iray. ‘Amin’ny andro vitsivitsy aho nihaona tamin’ny tovovavy maro. tsy ny tsara tarehy ireo koa, fa ireo dia Ho-L-L-F tany am-boalohany mailaka. Manoro hevitra aho ny olona rehetra mba hividy ny e-boky ‘vehivavy’. Hitako fa tena mahasoa sy tena azo ampiharina. Tao anatin’ny andro vitsivitsy aho nihaona tamin’ny tovovavy maro. tsy ny tsara tarehy ireo koa, fa ireo dia Ho-L-Le, (efa nanatona ny tena tsara tarehy ny mazava ho azy fa ny, tena tsara fa tsy nahatsapa ny tsirairay fa na dia tena mampihomehy), Ary tiako ny manasongadina fa ity fomba ity dia VOAJANAHARY ary, noho izany, dia tsy afa-tsy ny nametraka ny teknika mahomby ny manaraka, fa izany no manazava, amin’ny fomba tsotra sy ny linear, ny fomba mifandray amin’ny zazavavy nandritra ny fomba fiasa. Izany no tsara fampiasam-bola. Satria izany dia manome fahafahana antsika mba hahafantatra ny ankizivavy izay isika dia tsy sahy manandrana ny sakafo ny fiheverany ny tenany, ka nanome antsika fiadanana, ary mahatonga antsika hahatsapa toy ny olombelona.»Fotsiny nataony ho fampiharana ny fitsipika vitsivitsy, ary ny vokany dia azo antoka’, ary ny tany am-boalohany mailaka:’. Tiako ny zava-misy fa dia MAHOMBY avy hatrany, tahaka ny nataony ho fampiharana ny fitsipika vitsivitsy, ary ny vokany dia azo antoka. Nihaona ny amin’izao fotoana izao ny olon-tiany tao anatin’ny iray volana sy nahazo ny vehivavy izay naniry, ary izaho tsy afa-po.»Ny boky fanofanana. izany no mahagaga. ‘ny tany am-boalohany e-mail:’. ny nahavariana ahy indrindra dia ny boky fanofanana.
Misy be dia be ny fanazaran-tena tena ilaina. Manampy anao ny farany dia mitombo toy ny olona, ary ny tany am-boalohany mailaka:’. hahafantatra ny vaovao, ny vehivavy, tahaka ny rehetra ny ebooks ao amin’ny andian-dahatsoratra, manampy, farany, mba hitombo ho toy ny olona, ny fanaovana ho tsy noho ny ara-tsosialy pana, na ny tsy fisian’ny lehilahy olo-malaza, ny matanjaka momba. Ny andro rehefa nanomboka ny toko vatana teny, dia nifanena tamin’ny zazavavy mahagaga izay. ‘e-mail tany am-boalohany:’. Tena mahafinaritra sy tsara natao, tsy ny mahazatra diky.
arahabaina avy eo
Nomena fa izaho no tena misokatra ary efa sarotra ny fomba manokana fa izaho efa hita fa tena ilaina ny soso-kevitra ny amin’ny vatana ny fiteny sy ny toro-hevitra momba ny fomba hahazoana mahafantatra ny vehivavy ao amin’ny ranomasina sy ny ao amin’ny dobo filomanosana, tena misaotra, ianao dia afaka mahita fa miahy anao. Aoka ny antso izany vintana, fa ny andro, rehefa nanomboka ny toko vatana fiteny, ny Masony, ary tsy misy tanana ao am-paosy aho, dia nifanena tamin’ny zazavavy mahagaga izay. Isaorana i mark, ‘tiako izany be dia be, noho izany dia tanteraka tany am-boalohany sy ny mailaka:’. ny ebook tiako izany be dia be, noho izany dia vita. Manao malalaka indray mitopy maso an’i ny fomba hahazoana mahafantatra ny vehivavy ka misy impunti amin’ny fomba iray, ary izany no mahatonga anao mahatsiaro tony kokoa satria manana fahafahana bebe kokoa, ary ho toy ny vokatry izany dia mamela anao hahazo bebe kokoa ny vokatra.»Mahafantatra ny olona dia faran’izay tsotra sy ny tany am-boalohany mailaka:’. Eto dia ny vokatra: — voamariko, miaraka amin’ny dikany ny mahagaga fa mino aho fa ianao tsy afaka an-tsaina, fa mba mahafantatra olona faran’izay tsotra — inona no fahafinaretana izany dia mba ataovy adala ny vazivazy (ny madio tanjona hananihany nihomehy) miaraka amin’ny ankizivavy ianao dia zara raha fantatra ny anarany — ny olona tena na aiza na aiza, raha mbola manana ny herim-po manaiky rehetra, fanasana ho any an — fitiavana ao hanipy amin’ny antoko izay fantatro zara raha misy olona, indrindra fa ny any ivelany, izay velona aho. ‘
← Malaza indrindra amin'ny aterineto mampiaraka toerana: chats ary online mihaona
Ortodoksa Mampiaraka ny "ABC ny fankatoavana" →